गुनिलो गुर्जो « Tuwachung.com
पूर्णप्रसाद मिश्र	२०७८ बैशाख २०, १९:३४
नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना संक्रमण फैलिएका बेला रोगबाट बच्न आयुर्वेदिक गुणयुक्त वनस्पति गुर्जोका परिकार सेवन गर्ने बढ्न थालेका छन् । कोरोना पोजेटिभ भएकाले पनि गुर्जोका परिकार सेवन गर्न थालेपछि रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अनुभव सुनाएका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिका–८ बालकुमारीका जनकमान जोशीलाई चार महिनाअघि कोरोना पोजेटिभ देखियो । युट्युब, पत्रपत्रिकालगायत सामाजिक सञ्जालमा समेत गुर्जोको चर्चा सुनेपछि धूलो र चिया नियमित सेवन गरेको १४ दिनपछि ठीक भएको जोशीले जानकारी दिए ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय धुलिखेलका कार्यालय प्रमुख कमलबहादुर राजलवटलाई सम्पर्क गरेर गुर्जोको धूलो र चिया माग गरेका थिए । रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने वनस्पतिका रूपमा परिचित गुर्जोका परिकारले कोरोनाका साथै अन्य स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि सहयोग गरेको जोशीको भोगाइ छ ।
सिरहा लहानका बेचुलाल श्रेष्ठको परिवारमा छोरा, बुहारी र नातिलाई कोरोना पोजेटिभ देखियो । परिवारका तीनजनामा कोरोना देखिएपछि डराएका श्रेष्ठले गुर्जोले कोरोनाबाट बचाउन सहयोग गर्छ भन्ने सुनेका थिए । उनले पनि राजलवटसँग सम्पर्क गरेर गुर्जोका परिकार लिए । कोरोना हुने र नहुने परिवारका सदस्यले नियमित सेवन गरेपछि ठीक भएको उनले सुनाए ।
परिवारमा संक्रमण भेटिएपछि सबैजना एकान्तवासमा बसेर नियमित गुर्जोका परिकार सेवन गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएको श्रेष्ठले सुनाए । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (क) बाट निर्वाचित बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठले भने गुर्जोसँगै तातोपानी पिउने, बाफ लिने र पौष्टिक आहार सेवन गर्न थालेपछि कोरोना भगाउन सफल भएको बताए । कोरोनाले स्वास्थ्यमा अप्ठ्यारो भने पारेको उनको अनुभव छ ।
कोरोना बढेपछि मदनकृष्ण श्रेष्ठको परिवारका पाँचैजना सदस्यलाई कोरोना पोजेटिभ देखियो । यो खबर सुनेपछि गुर्जाे चिया र गुर्जोसहितको धूलो औषधि ललितपुरको सुनाकोठीस्थित घरमै पुगेर दिइएको अभियानकर्मी राजलवटले सुनाए । कलाकार श्रेष्ठलाई अक्सिजन बढाउन तथा फोक्सोलाई बलियो बनाउन सहयोग हुने प्राणायम पनि गराइएको योग शिक्षकसमेत रहेका उनले बताए । श्रेष्ठसँगै उनको सबै परिवारलाई गुर्जोको ओषधिसँगै प्राणायामको विशेष प्रकार पनि सिकाइएको थियो ।
राजलवटले संवत् २०७६ चैतमा नेपालमा कोरोना संक्रमित देखिएदेखि नै गुर्जोका बिरुवा, धूलो, औषधि र चिया निःशुल्क वितरण गर्दै आएका थिए । यसअघि राजस्व कार्यालय लहानको प्रमुख रहेका राजलवटले त्यहाँको सरकारी निवास परिसरमा गुर्जोका बिरुवा उत्पादन गरी देशव्यापी रूपमा वितरण सुरु गरेका हुन् ।
हालसम्म १ लाख ६० हजारभन्दा बढी गुर्जोका बिरुवा वितरण गरिएको उनले सुनाए । त्यति नै संख्यामा गुर्जोबाट बनेको चिया र धूलो पनि निःशुल्क वितरण गरिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा हुने कार्यक्रममा निःशुल्क गुर्जोको चियासमेत करिब दुई लाख मानिसलाई खुवाइएको राजलवटले बताए । गुर्जोका परिकारले कब्जियत हटाउने, तरोताजा एवम् स्फुर्तिसमेत बढाउने सेवनकर्ताको अनुभव छ ।
यस्तै महत्वको औषधि भएकाले एक घरमा अनिवार्य रूपमा एउटा गुर्जोको बिरुवा रोपे धेरै रोगका लागि औषधिको काम गर्ने, नियमित सेवनले मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्ने आयुर्वेद चिकित्सक डा. शेषराज आचार्य बताउँछन् ।
आयुर्वेदशास्त्रको ‘यस्य देशस्य यो जन्तो : तस्य तद् औषधं हितम्’ अर्थात् जुन स्थानमा मानिस जन्मन्छ, उसलाई औषधिको काम गर्ने वनस्पति त्यहीं हुन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा गुर्जोजस्ता ओषधीय गुणले युक्त वनस्पति संरक्षण गरिनुपर्ने उनले बताए । हिमालयका काखमा रहेको नेपाली वनपाखामा धेरै किसिमका औषधीय गुणयुक्त जडीबुटी एवम् वनस्पति भए पनि तिनको सदुपयोग हुन सकेको छैन । कतिपय जडीबुटी, वनस्पति चोरीनिकासी भई त्यसमा रासायनिक पदार्थ मिलाएर बनाइएको आधुनिक औषधि नेपालमा भित्रने गरेको अभियानकर्मीको गुनासो छ ।
राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा ६५ जना कोरोना संक्रमित राखी आयुर्वेद औषधि दिइएको छ । यसअघि पनि सयौं कोरोनाका बिरामी केन्द्रमा राखेर आयुर्वेद औषधि नै दिएर उपचार गरेर पठाइएको थियो । अस्पताल, तालिम र अनुसन्धान केन्द्र भएकाले दिइएका औषधिका विषयमा अनुसन्धानसमेत भइरहेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रामआधार यादवले सुनाए ।
केन्द्रमा आउने कोरोना बिरामीलाई गुर्जो, सुठो, मरिच, पिप्ला, अभ्रकभष्मलगायत आयुर्वेदिक वनस्पतिको ट्याब्लेट बनाएर नियमित खुवाउने गरिएको छ । केहीलाई भने अक्सिजन दिनुपर्छ । हालसम्म केन्द्रमा भर्ना भएका कोरोनाका बिरामीको निधन नभएको कार्यकारी निर्देशक डा. यादवले जानकारी दिए ।
रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने आयुर्वेदिक औषधिको माग बजारमा बढ्न थालेको छ । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. सबरी साह गुर्जो चिया, तुलसी चिया, सिलाजित, च्यवनप्रास, अश्वगन्ध तेल र अविपत्तिकर चुर्णलगायतको माग बढिरहेको बताए ।
चीनको मिडिया रिपोर्टका अनुसार च्याङचुन गाउँको आसपासमा निकोटिन एडिक्टेड कछुवा बस्ने गर्छ । जसले दिनमा